Chrome 81 inosvika ichiwedzera rutsigiro rweNFC nekuvandudza kuchengetedzeka Linux Vakapindwa muropa
Chrome 81 inosvika ichiwedzera rutsigiro rweNFC uye nekuvandudza kuchengetedza kwebrowser
pablinux | | Noticias, Zvirongwa
Kwekupedzisira Kukadzi, Google yakatanga iyo v80 kubva ku browser rako. Panguva iyoyo, nyika yanga isati yatora matanho ekuzvidzivirira kubva kuCOVID-19, uye chikamu ichocho chakauya nenhamba yakajairika yeshanduko. Nezuro, kambani inozivikanwa neinonyanya kukosha injini yekutsvaga yakatanga Chrome 81, vhezheni ine runyora rwemashoko kwete kunyengedza zvakare. Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti honzeri idenda, iro rave kuzobata vashanduri veGoogle zvakanyanya zvekuti vafunga kusvetuka vhezheni huru.
Huwandu hweshanduro iyi ndi81.0.4044.92 uye inosanganisira shanduko senge rutsigiro rweNFC Web API, zvinozoguma nemawebhu webhu. ivo vachakwanisa kushandisa iyo NFC zvakabatanidzwa. Mune mamwe mazwi, kana komputa yedu inosanganisira chipenga cheNFC, zvinowirirana zvewebhu webhusaiti izvo zvatinomhanya paChannel 81 kana gare gare zvinokwanisa kuwana kwazviri, pakati pezvimwe zvinhu, kuendesa mafaira uye data. Kune rimwe divi, Google yaisanganisira makumi matatu nematatu ekuchengetedza.
Google ichaita iyo kusvetuka kubva kuChannel 81 kusvika Chrome 83
Mozilla inoita kunge isina kubatika nedambudziko rakanyanya kutaurwa reCOVID-19. Nezuro vakatanga Firefox 75 uye mwedzi unotevera ivo vanovhura Firefox 76, asi haina kuita zvakafanana kuGoogle. Kana tikatarisa kuti ivo vanowanzo buritsa vhezheni itsva mavhiki masere ese, Chrome 8 inofanirwa kusvika pakutanga kwaJune, asi vakati kuvhurwa hakuitwe uye ichaenda yakananga kuChannel 83. Iyo purogiramu ichagadziridzwawo zvishoma, nekuti kumhara uku kuchaitika pakati paMay, mavhiki mashoma Chrome 82 isati yasvika.
Chrome 81 ikozvino yave kuwanikwa kune ese akatsigirwa masisitimu kubva kune yepamutemo webhusaiti, iyo iwe yaunogona kuwana kubva Iyi link. Muchiitiko chevashandisi varipo, kana uchiisa iyo browser kekutanga iyo zvakare inowedzera yepamutemo repository, saka kumutsiridza kuri nyore sekuvhura software centre kana kugadzirisa app uye nekuisa mapakeji nyowani ayo achange akatomirira isu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chrome 81 inosvika ichiwedzera rutsigiro rweNFC uye nekuvandudza kuchengetedza kwebrowser
XCP-NG 8.1 iri pano uye inouya zvichibva paCentOS 7.5, kugadzirisa kweEFI uye nezvimwe